CIYAARAHA | WWW.JUUNGAL.COM
Emmanuel Petit: Xavi Iyo Messi Aad Ayay U Fiican Yihiin, Lakiin Ronaldo Ayaa U Qalma Fifa Ballon d’Or.
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe Barcelona Emmanuel Petit ayaa sheegay in Xavi iyo Messi ay tahay in laga jeesto abaalmarinta FIFA Ballon d’Or, islamarkaana Cristiano Ronaldo uu yahay ciyaaryahanka uu la jecel yahay inuu ku guuleysto sannadkan.
Kooxda Blaugrana ayaa sannadkan ku guuleysatay shan koob, iyadoo Copa del Rey kaliya laga qaaday ka dib goolkii Ronaldo.
Lakiin, halka ciyaaryahankii hore ee Monaco, Arsenal iyo Chelsea uu leeyahay Barcelona waa kooxda adduunka ugu fiican, hadana waxa uu aaminsan yahay in Ronaldo uu u qalmo abaalmarinta laacibka adduunka.
“Xavi waxan uu dib u qoray sida loo hagaajiyo khadka dhexe” ayuu Petit u sheegay Marca.
“Ciyaarta Barca isaga ayay soo dhexmartaa, waa ciyaaryahan tayo sarre leh. Messi waxa uu isku keenaa wax walba oo ay Barca sameyso, waa ciyaaryahan heer sarre ah, waa ciyaaryahan sida ‘PlayStation’ u ciyaara”
“Lakiin aniga waxaan abaalmarinta siin lahaa Ronaldo, labada kalena waan jeclahay. Madrid waxa ay ciyaartaa ciyaar waxoogaa ka yara duwan tan Barcelona, lakiin waxa uu leeyahay rikoorkiisa u gaar ah”
26 jirka reer Portugal ayaa dhaliyay 53 gool 54 kulan oo uu u saftay tartamada oo idil kooxda Los Blancos xilli ciyaareedkii 2010-11, lakiin kooxda Real Madrid waxaa lagu reebay semi-finalka Champions League waxaana ay kaalinta labaad ka galeen La Liga, iyagoo labada jeerba dhibane u ahaa Barcelona.
“Ka dib markii uu noqday boqorka England, kama uusan labalabeyn inuu qaato fursada cusub ee tartanka Madrid” ayuu Petit ka yiri ciyaaryahankii hore ee Manchester United.
“Waxa uu awoodaa inuu qiyaaso mus’uuliyadooda oo buuxda, waxaana uu madax kaga fiican yahay Messi. Lakiin waxaan rajeynayaa in labadoodaba ay gaari doonaan halka ugu sareysa”
Ciyaaryahanka ku guuleysta abaalmarinta Ballon d’Or waxaa lagu dhawaaqi doonaa 9ka bisha Janaayo.
Alex Song Oo Ugu Baaqay Tababare Arsene Wenger Inuu Amaah Kula Soo Wareego Thiery Henry.
Alex Song ayaa taageeray qorshaha amaahda ee laga yaabo inuu Thiery Henry dib ugu soo laabto kooxda Arsenal, isagoo rajeynaya in tababare Arsene Wenger uu u dhaqaaqi doono inuu amaah ku soo qaato bisha Janaayo.
Wenger ayaa diiday inuu meesha ka saaro inuu u dhaqaaqayo Henry oo weli ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan Gunners mudadii 8da sanno aheyd ee uu guulaha la qeybsaday.
Ciyaaryahanka reer France ayaa ka tagay Emirates 2007dii isagoo ku biiray Barcelona ka hor inta uusan u jiheysan horyaalka Mareykanka oo uu haatan u ciyaaro kooxda New York Red Bulls.
Lakiin waxaa laga yaabaa in saaxiibadiisa hore ee Arsenal uu amaah kula sii ciyaaro inta uu dib uga bilaabanayo horyaalka Mareykanka, waxaana Song uu qabaa in kabtankii hore uu guul weyn noqon karo.
“Marka aan ku arko tababarka, si maldahan ayaan u la hadlaa, waxaan ku iraahdaa: ‘weli waa inoo ciyaari kartaa waa ogtahay ayaan u maleynayaa?’ lakiin iima jawaabo kaliya waa uu dhoola cadeeyaa” ayuu Song u sheegay L’Equipe.
“Wixii uu helay intii uu Arsenal u ciyaarayay waa cajiib. Ma jirto wax kale oo uu isku soo saarayo oo kubada cagta ku aadan. Maanta waxa uu heysataa fursada oo uu inagu caawin karo”
“Ciyaaryahan isaga oo kale ah, waxa uu inoo soo saa’idin karaa wax badan”
Arsenal Oo Loo Diiday Kaalin Afaraad Ka Dib Markii Lagula Dhegay Garoonkeeda Emirates Stadium
Kooxda Arsenal ayaa seegtay fursad ay ku geli lahaayeen kaalinta afaraad ee Premier League ka dib markii uu hor istaagay goolhaye Wayne Hennessey oo kooxdiisa Wolves u sahlay inay barbaro 1-1 ah Emirates Stadium kula gasho kooxda Arsenal.
Kooxda Gunners oo guuldarro aysan ka soo gaarin Wolves tan iyo 1979kii ayaa raadinaysay inay ka faa’ideystaan barbarihii Chelsea ay la gashay Fulham, waxaana hogaanka u dhiibay daqiiqadii 8aad ee ciyaarta ciyaaryahan Gervinho oo fursad u helay inuu ka dhexbaxo qayaanada Offside-ka isagoo dhaliyay goolkiisii afaraad ee xilli ciyaareedka.
Si kastaba, Steven Fletcher ayaa dhaliyay goolkii barbaraha 7 daqiiqo markii ay ka harsaneyd qeybtii hore ee ciyaarta ka dib markii uu kubad madaxa ku dhaliyay.
Inkastoo kooxda Wolves lagu soo reebay 10 ciyaaryahan ka dib markii uu casaan ka qaatay Nenad Milijas oo qalad ku galay Mikel Arteta daqiiqadii 75aad ee ciyaarta ayaa waxaa Arsenal guusha ka horistaagay goolahaye Hennessey oo fursado badan ka badbaadiyay Robin van Persie, waxaana Gunners ay weli baaqi ku sii ahaan doontaa kaalintooda shanaad ee kala sareynta horyaalka Premier League.
Yaaqshiid Oo Finalka Soo Gaartay, Xilli Taageerayaal Badan Oo Wadajir Ah Uu Gaari La Rogmaday.
Kooxda degmada Yaaqshiid ayaa u soo baxday finalka koobka degmooyinka gobolka Banaadir oo si xiiso leh uga socday Stadium Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Yaaqshiida ayaa rigoorayaal kaga gudubtay kooxda degmada Wadajir oo ciyaar adag ay isla galeen, taasoo ku dhamaatay 90kii daqiiqo barbaro gool iyo gool ah.
Rigoorayaal ayaa loo dhigay labada kooxood si ay ugu kala baxaan, islamarkaana loo ogaado kooxdii finalka la ciyaari laheyd Dherkenleey oo shalay iyadu soo baxday ka dib markii ay garaaceen kooxda degmada Hodan.
Rigoorayaashii la dhigay waxaa 4-3 ku badisay kooxda degmada Yaaqshiid oo sidaasi ku xaqiijisatay booskeeda finalka koobka degmooyinka gobolka Banaadir.
Kulankii maanta oo taageerayaal badan ay soo qeyb galeen ayaa ahaa mid xiiso leh, iyadoo labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaar qancisay dadweynihii u soo daawasho tagay.
Lakiin ciyaarta ka dib ayaa waxaa dhacay shil laga naxo ka dib markii gaari weyn oo ay ka buuxeen taageerayaasha degmada Wadajir uu ku rogmaday agagaarka isgoyska dabka, taasoo la soo sheegayo inuu geystay qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh.
Inkastoo qasaaraha soo gaaray aan weli si rasmi ah loo sheegin, hadana wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in dhimasho ay jirto islamarkaana ay weli jiraan dad ku hoos jira gaariga hoostiisa.
Waxaan ilaah uga baryeeynaa dadkii ku dhintay shilkaasi naxdinta leh inuu janadii fardowsa eebe ka waraabiyo qoyskii iyo qarabadii ay ka baxeena samir iyo iimaan eebe ka siiyo.
Inta dhaawaca uu ka soo gaaray waxaana ilaah uga baryeeynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Aamiin
Inter Oo Qorsheyneysa Inay Iska Iibiso Sneijder, Si Lacagta Ay Ka Heelan Uga Soo Adeegtaan Suuqa
Kooxda Manchester United ayaa laga yaabaa inay dib u soo cusbooneysiiso xiisaheeda ciyaaryahan Wesley Sneijder ka dib markii la sheegay in Inter Milan ay qorsheyneyso inay iska iibiso ciyaaryahanka khadka dhexe si ay lacagta ay ka helaan ay ugu soo iibsadaan ciyaaryahano kale. Sida ay maanta daabacday Daily Mail.
Sneijder ayaa ku soo dhawaaday inuu u dhaqaaqo xagaagii garoonka Old Trafford, lakiin Fergie ayaa looga digay lacagta adag ee uu ciyaaryahanka mushahar ahaan u qaadanayo.
Si kastaba, tababaraha United Sir Alex Ferguson ayaa laga yaabaa in lagu qasbo inuu galo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ka dib dhaawacyo hareeryay ciyaartoyda muhimka ah.
Darren Fletcher ayaa talo dhaqtar ku maqan, Nemanja Vidic waxa uu maqnaanayaa inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, Anderson waxa uu la dagaalamayaa dhaawac muddo dheer, Javier Hernandez iyo Tom Cleverly ayaa iyagana dhaawac ah.
Wargeyska Daily Mail ayaa sheegaya in ciyaaryahanka reer Holland oo 27 jir ah ay tahay inuu aqbalo mushahar ka yar 200 kun ginni isbuucii hadii uu doonayo inuu u dhaqaaqo kooxda Ingariiska.
Ferguson ayaa dhawaan sheegay inuusan u baahneyn inuu galo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha Janaayo, lakiin waxa uu hadalkiisa raaciyay in hadii ciyaaryahan muhim ah uu diyaar soo noqdo inay markaasi soo iibsanayaan.
Tababaraha kooxda Inter Claudio Ranieri ayaa qirtay inay ku adag tahay inuu iska iibiyo Sneijder, lakiin meesha kama uusan saarin suurtogalnimada inuu baxo bisha Janaayo.
Ranieri ayaa yiri: “Ma doonayo in aan ka fekero kooxda oo uu ka maqan yahay Sneijder waa baal ka mid ah baalasha aan ku duulno”
“Waxaan u bartay inaan ku hadlo afar darbi dhexdooda, hadii aan ka hadlayo wax ku saabsan suuqa kala iibsiga waxaan kala hadlayaan madaxweyne Moratti”
Tababaraha Chelsea Andre Villas -Boas Oo Rajo Xumo Ka Muujiyey U Tartanka Kooxdiisa Ee Horyaalka Ingariiska.
Tababaraha kooxda Chelsea Andre Villas-Boas ayaa qirtey in kooxda Chelsea ay ka hartay u tartanka horyaalka Premier League kadib markii saddex kulan oo isku xigta ay barbaro dhaafi weysey.
Kooxda Blues ayaa kaalinta afaraad ku jirta kadib markii kulan ka dhacay garoonkooda ay kooxda Fulham 1-1 isla dhaafi waayeen ayna 11 dhibcood ka hooseysaa kooxda hogaanka haysa ee Man City.
Clint Dempsey ayaa goolkii uu u dhaliyey Juan Mata kooxdiisa waxa uu ka dhigey waxba kama jiraan waxayna taasi ka dhigtey in uu tababaraha Chelsea sheego in lga yaabo in kooxda Chelsea uu ka dhamaaday hamigeedii ahaa koobka Premier League.
“Waa inaad ku qiimeysaa wax walba sida ay yihiin, ma jiraan wax qayaali ah sida ay haatan wax u muuqdaan.”
“Balse, waa inaad noqotaa qof dhabta ka hadla, ma ku hoos noolaan kartid rajo qayaali ah marka uu farqigu weyn yahay”.
“Farqiga u dhexeeya annaga iyo kooxda ugu sareysa horyaalka wuu weyn yahay”.
“Waxaan hoos u soo dhigney illaa 7 dhibcood dhowaan balse inta ay City iy United ay helayaan guulo way nagu adkaan doontaa annaga”.
“Ma dhihi karto waa wax aan suurtogal ahayn laakiin waa inaan xooga saarnaa halka aan joogno oo aan samayno qiimeyn dhab ah” ayuu hadalkiisa raaciyay..
“Waxaan rajaynayay in bisha December ay noo noqoto mid macquul ah, balse haddii ay noo wanaagsanaan lahayd waxa ay ahaan lahayd mid sida hada ka duwan lakiin haddii ay City iyo United ay howshoodii sii wadeen annaga waa ay nagu adkaanaysaa in aan guuleysano.”
Villas-Boas ayaan wax cabasho ah ka keenin natiijadii shalay balse waxaa si weyn u amaanay goolhayaha Fulham David Stockdale.
“Waxaan abuurnay fursado badan gaar ahaan qeybtii dambe balse waa ay iska cadeyd in aanan heli karin saddexda dhibcood,”ayuu yiri tababaraha kooxda Chelsea Villas-Boas
Ciyaaryahanka Kooxda Chelsea Malouda Oo Kala Dooransiiyay Tababarihiisa Inuu Ciyaarsiiyo AmaTegid.
Ciyaaryahanka kooxda Chelsea Florent malouda ayaa sheegay in tababaraha kooxda uu ku qasbayo inuu isaga tago kooxda Chelsea illaa laga siiyo waqti badan oo uu u ciyaaro kooxda.
Ciyaaryahankan qadka dhexe ka ciyaara ayaa ku bilowday afar kulan oo kaliya xilli ciyaareedkan kamana mid ahayn laacibiinta garoonka ku bilaabanaysay tan iyo kulankii bishii hore ee Carling Cupka ee Liverpool.
Hase yeeshee waxa uu mar labaad noqday mid kursiga keydka la fariisiyo soona gala ciyaarta oo 29 daqiiqo ka dhiman tahay kulankii 1-1 ee ay kooxda Chelsea iyo Fulham ku kala baxeen, Malouda ayaa bedel ku soo galay daqiiqadii 61aad isagoo bedelay Frank Lampard.
31jirkan ayaa sheegay in u raadin doono inuu isaga huleelo garoonka Stamford Bridge marka la gaaro bisha Janaayo ee soo socota haddii uusan xaalku is bedelin.
Malouda oo ka hadlaya dhibaatada soo wajahday ayaa yiri: ‘Waqtiga aan ciyaaro ima qanciyaan, aad ayay iigu yar yihiin marka loo fiiriyo niyadeyda, haddii ay muhiim noqotana waan isaga tegi doonaa Chelsea.’
Bayern Leverkusen Oo Dooneysa Inay Dib U Soo Ceshato Laacibkeedii Hore Dimitar Berbatov.
Kooxda Bayer Leverkusen ayaa xiiseyneysa inay la soo wareegto weeraryahanka Manchester United Dimitar Berbatov, waxaana ay xiriir la soo sameeyeen ciyaaryahanka sida ay uu xaqiijiyay wakiilkiisa.
Wargeyska Bild ee ka soo baxa Germany ayaa wax ka weydiiyay wakiilkiisa waxa ka jira xanta ku saabsan in Berbatov uu ku sii jeedo Leverkusen, waxaana uu ku jawaabay:
“Waa wax ka badan xan kaliya. Leverkusen niyada ayay ku hayaan inay dib u la soo wareegaan Berbatov” ayuu yiri Ivan Dobrinov.
“Xiriir ayaa jiray oo ay nala soo sameeyeen, lakiin wax adag oo miiska saaran ma jiraan, waxaana ay ku xiran tahaty qorshaha United”
Berbatov ayaa kaliya 14 kulan ka soo muuqday United, waxaana qandaraaskiisa United uu ku egyahay xagaaga soo socda. Lakiin kooxda United ayaa heysata qiyaar ay hal sanno ugu kordhin karto qandaraaskiisa madaama ay qeyb ka aheyd heshiiskii hore.
“Ciyaaryahanka ma uusan ilaawin Leverkusen, weli waa uu jecel yahay kooxda. Waxaa intaas sii dheer waxa uu xiriir fiican la leeyahay madaxda Bayer”
Ciyaartii ugu danbeysay, 30 jirkaan ayaa seddexleey ka dhaliyay kooxda Wigan. Waxaana xiisaha Bayer Leverkusen kula wehliya kooxaha Tottenham iyo Fulham.
Zinedine Zidane Oo Amaanay David Beckham: Ma Sameyn Karin Waxa Uu Beckham Sameeyo.
Zinedine Zidane ayaa amaanay ciyaaryahanka haatan ku dhow inuu ku biiro kooxda Paris St Germain David Beckham, iyadoo ciyaaryahankii hore ee ku guuleystay Ballon d’Or uu sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee LA Galaxy uu sameyn karo waxyaabo uusan isagu sameyn karin.
36 jirkaan ayaa si aad ah loo hadal hayaa inuu ka soo tago horyaalka Mareykanka kuna biiro kooxda PSG madaama sabtida uu dhacayo heshiiskiisa kooxda LA Galaxy.
Zidane oo Beckham ay iskula soo ciyaareen Real Madrid ayaa ereyo cajiib ah ku amaanay ciyaaryahankii hore ee England wareysi uu siiyay majalada France Football.
“Ma aqaan sida uu isku dejiyo marka uu garoonka ku dhex jiro. Waa sida heesaa caan ah. Sidaasi ma sameyn karin. Waa qof aan caadi aheyn, gaar ahaan waxa uu u xishood badan yahay sideyda oo kale”
Agaasimaha kooxda Real Madrid ayaa intaas ku daray in imaanshiyihii Beckham ee Bernabeu 2003dii inay shaqadiisa khadka dhexe ka dhigtay mid sahlan.
“Markii uu Real yimid waxa ay shaqadeyda ii noqotay mid sahlan. Mas’uuliyada ayaa iga yaraatay. Si kastaba waa sida aan dareensanaa”
“Markii uu Real imaanayay waxa uu ka walwalsanaa waxa kooxda ay ka aaminsan tahay. Wax kasta oo saxaafada ay ka sheegto waa uu ka walwalsanaa, waxaana ay dhibaato ku abuuri kartay qaab ciyaareedkiisa”
“Lakiin marka uu garoon soo galo waxa uu leeyahay farsamo sarre waxaana uu soo bandhigaa inuu tartanka diyaar u yahay sida ciyaartoyda Ingariiska lagu yaqaano”
Kubadsameeyaha Dortmund Mario Gotze Oo Sheegay Inuu Ku Riyoonayo Inuu Ku Biiro Kooxda Barcelona.
Ciyaaryahanka kubadsameeyaha kooxda Borussia Dormund ee ku guuleystay abaalmarinta wiilka dahabiga ayaa sheegay inuu ku riyoonayo inuu mar uun u ciyaaro kooxda Barcelona ee dalka Spain.
Ciyaaryahanka oo ka mid ah laacibiinta da’da yar ee ugu fiican aduunka ayaa waxaa doonaya kooxo badan oo ka dhisan qaarada yurub, waxaana uu carabka ku adkeeyay inuusan kooxna ku doorsaneynin kooxda haatan heysata Koobka Kooxaha Adduunka ee Blaugrana.
“Qof walba oo laacib ah oo caqli leh waxa ku riyoonayaa inuu u ciyaaro kooxda Barcelona, anigana riyadeyda waa midaas” ayuu yiri Gotze oo wareysi siinayay majalada Jarmalka ee Bild.
Gotze ayaa intaas raaciyay inuusan haatan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo la taaban karo oo la xiriirta inuu ku biirayo Barcelona, isagoo sheegay inuusan haatan qorsheyneynin inuu ka tagayo kooxdiisa Broussia Dortmund.
“Uma maleynayo inaan ka tagayo kooxdeyda, inkastoo ay sharaf ii tahay inay kooxo badan isoo dalbadaan” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Laacibkaan ayaa sidoo kale ka hadlay inuu horyaalka Spain ka xiiseynayo kan Premier League.
“Waxaan ka doorbidyaa inaan Spain ka ciyaaro halkii aan ka ciyaari lahaa Premier League, kubada cagta Spain ayaa ku fiican awoodeyda. Riyada ciyaaryahan walba waa inuu ka ciyaaro Spain, waxaa halkaas jooga kooxo waa weyn sida Madrid iyo Barcelona”
Gotze ayaa qeyb libaax leh ka qaatay inuu ka caawiyo kooxda Dortmund inay ku guuleystaan horyaalka Jarmalka xilli ciyaareedkii hore. 19 jirkaan ayaa qandaraaskiisa uu kula jiro kooxda Borusia waxa uu ku egyahay 2014ka .
Waxa uu hore meesha uga saaray inuusan u wareygeynin kooxda Bayern Munich, lakiin 40 milyan oo ginni hadii Dortmund loo soo bandhigo waxa ay keeni kartaa in laga faro maroojisto laacibkooda da’da yar.
Tababaraha Milan Allegri Oo Aaminsan In Milan Ay Ku Guuleysan Karto Champion League 2013-ka.
Tababaraha kooxda AC Milan Massimiliano Allegri ayaa aaminsan in kooxdiisu ay ku guuleysan karto horyaalka Yurub ee Championka xilli- ciyaaredka dambe balse ay sanadkan dadaal badan muujin doonaan.
Rossoneri ayaa u soo baxday wareegga 16aad iyadoo ku soo beegantay ciyaaraha Knock Outka kooxda ka dhisan dalka Ingiriiska ee Arsenal .
“Barcelona waxa ay tahay kooxda ugu wanaagsan dunida,balse markii aan ku wada ciyaarnay Spain wax badan oo halis ah ma samayn,”ayuu u sheegay Allegri wargeyska Gazzetta dello Sport.
“Waxaan ciyaartaa kala soo noqonay inaan ogaanay in aan wax badan oo guulo ah gaari karno. Waxaan rumeysnahay in xilli-ciyaareedka dambe aynu qaadi karno koobka Championka balse xilli ciyaareedkan xitaa aan wax badan samayn karno.”
Allegri ayaa xilli ciyaareedkii ugu horeeyey ee uu leyliyo Milan waxa uu ku guuleystay Scudetto haatana waxa ay si wadajir ah u hogaaminayaan horyaalka Serie A-da kooxda Juventus. Hase ahaatee Allegri ayaa u baahan in loo kordhiyo kunturaadiisa oo ku eg June 2012ka.
Allegri oo ka hadlaya xilliga loo kordhinayo Kunturaadiisa ayaa yiri; “Weli iskuma raacin oo kuma heshiin mudada la iigu darayo heshiiska Adriano Galliani iyo President Silvio Berlusconi. Haddii ay iigu daraan waxaan ku farxi doonaa, waayo taas waxa ay la micno tahay inay aaminka igu qabaan. Waan aqaan halka aan ka hormarinayo kooxda.”
Hase ahaatee dhowaan ayuu Berlusconi waxa uu si cad u dhaliilay tababare Allegri isagoo ku eedeeyey in uu ka tagay oo tarabuunka saaray Pippo Inzaghi.
“Dhowrkii ciyaar ee la soo dhaafay waxaan u ciyaarnay si xun dhibaatooyin ayaana i soo wajahay,laga yaabee daalka inuu ahaa, taasoo laga arki karay xitaa tababarka,” ayuu sii raaciyey Allegri.
Mar uu ka hadlayay tababaraha arrimaha Inzaghi waxa uu yiri:“Badanaa marka aan la hadlo Berlusconi waxa uu i weydiiyaa Inzaghi. Waxana aan u sheegay maadaama uusan tababar badan qaadan inaanan safi karin, wayna iska cadahay in qaar kamid ah taageerayaasha kooxda aysan go’aankaas raalli ka ahayn. Balse Milan ma ahan koox raadinaysa xayeysiin ee waxa kale oo ay raadineysaa guulal.
“Inzaghi wax uu ku leeyahay ciyaaraha taariiq wanaagsan sida ciyaaryahano kaleba, laakiin waa inaan qiimeeyaa waxa uu hadda isaga ka samayn karo garoonka dhexdiisa.
“Milan waa inay is ilaalisaa ayna si wanaagsan u xukuntaa kubbadda, Juventus waxa ay leedahay wax gaar ah. Maadaama aan laga badin xilli ciyaareedkan taasna sabab ayay u haystaan.” ayuu ku sii daray Allegri mar uu ka hadlayay kooxda Juve.
“Kooxda Bianconeri ayaa ah tan Scudetto nagula tartamaysa,inkastoo kooxo kale ay si wanaagsan u ciyarayaan kooxda Interna waa koox weyn.
“Ciyaartoydayda waxaa ka mid ah Ignazio Abate oo horumar weyn sameeyey, una ah astaan kooxda Milan, waa ay fududahay in la iska dhaho Zlatan Ibrahimovic ama Thiago Silva, balse aniga waxaan u codeyn lahaa Antonio Nocerino.” Ayuu ku soo gabagabeeyey wareysigii lala yeeshay tababaraha kooxda AC Milan Allegri.
Wadajir Oo Afka Ciida U Dartay Howlwadaag Iyo Waaberi Oo Guuldarro Kala Kulantay Yaaqshiid
Ciyaaro Xiiso badan ayaa galabta waxa ay ka dheceen Garoonka kubadda cagta Koonis ee Magaalada Muqdisho oo ay ka socdaan Ciyaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir oo heer gabagabo maraya.
Ciyaaro Xiiso leh ayaa galabta garoonkaasi waxa ay ku dhexmareen Yaaqshid Vs Waaberi iyo Howlwadaag Vs Wadajir iyadoo Ciyaarta hore ay dhexmartay Yaaqshid Vs Waaberi.
Dad aad u fara badan oo taageero ah ayaa soo buux dhaafiyey garoonka oo kala socda Afarta degmo ee Waaberi, Yaashid, Howlwadaag iyo Wadajir, kuwaas oo isugu jira dad dhalin yaro ah iyo haween sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa oo ciyaarahaasi kasoo qeyb galay gudoomiyeyaasha Degmooyinkaasi.
Yaaqshiid ayaa qeybtii hore ee ciyaarta ciyaar wanaagsan halkaasi ku soo bandhigtay waxaana taasi ay sababtay in Yaaqshiid ay maanta ku badiso 3-1, iyadoona goolkii labaad ee Yaaqshid ay dhalisay ay ahayd gool ay taageerayaasha Waaberi ay garoonka isaga dareereen.
Ciyaartii kale ee la sugayey waxa ay ahayd Ciyaartii dhexmartay galabta degmooyinka Wadajir iyo Howlwadaag, inkastoo ciyaartii hore ay ku soo dhamaatay Yaaqshiid 3 gool la timid iyo Waaberi oo 1 keensatay laakiin ciyaartii dambe ayaa waxa ay ahayd mid aad u xiiso badan.
Ciyaarta dhexmartay degmooyinka Howlwadaag iyo Wadajir ayaa waxa ay ahayd mid aad u xamaasad badan waxaana da’yarta Wadajir ay halkaasi ku soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleystay waxaan garoonka dhinac fadhiyey oo aad u taageerayey islamarkaana dhiirigelinayey guddoomiyaha degmada Wadajir Axmed Daaci.
Kooxaha Chelsea Iyo Juventus Oo Tartan Ugu Jira Weeraryahanka Real Madrid Ee Higuain.
Kooxda Chelsea ayaa rajo ka qabta inay heshiis la gaarto weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Gonzalo Higuain si uu u buuxiyo booska Didier Drogba hase yeeshee waxaa tartanka ku soo biirey kooxda Juventus oo iyadana dooneysa weeraryahankan.
Weeraryahankan ka soo jeeda dalka Arajantin ayaa noqday mid indhaha tababare Mourinho uu ka qariyey karim Benzema waxaana suurtogal ah in uu soo afjaro muddo lix sano ah oo uu ka ciyaarayay dalka Spain xaggaaga soo socda.
Si kasta ha ahaatee Chelsea ayaa rajayeneysay inay kaga hormarto Juve oo dooneysa inay hubiso in ay u soo baxday inay ka ciyaarto championka sanadka dambe waxayna ku dooneysaa inay ku bixiso weeraryahankan lacag dhan £24million sida lagu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Talyaaniga ee La Stampa.
Kooxda the Blues ayaa waxaa ka tegey Nicolas Anelka, waxana ay sidoo kale weyn doontaa inta badan bisha January weeraryahankeeda Drogba oo u kicitimi doona tartanka koobka qaramada qaarada Afrika halka Fernando Torres ay xaaladiisu tahay mid ibixi oo ibixi ah.
Inkastoo Higuain uusan u safan karin Chelsea ciyaaraha Europe, Balse tababare Andre Villas-Boas waxa uu rumeysan yahay in 24jirkan uu yahay ciyaaryahan ay Chelsea uga faa’ideysan karto ciyaaraha gudaha uuna noqon karo mid goolal badan u dhaliya.
Horaantii bishan ayaa wargeyska Daily star waxa uu qoray: ‘Higuain waxa uu ka xun yahay in mar walba laga tago. Waxa uu doonayaa in uu ka qeybgalo ciyaaraha lagu doonayo in koobab lagu helo, Laakiin Higuain waxaa la fariisiyey kursiga keydka ciyaartii Barcelona ugaga badisey Real 3-1.Wuu yaqaan halka goobtiisu ay tahay, Waxa uu xiiseynayaa waxa dadka ay ku yiraahdaan isaga.’
Higuain ayaa sidoo kale waxaa isha ku haysa naadiga lacagta badan leh ee ka dhisan dalka Faransiiska ee Paris Saint-Germain iyo kooxdiisii hore ee River Plate.
Francesco Totti: Waxaan Jeclaan Lahaa Inaan Ka Hoos Ciyaaro Tababare Jose Mourinho
Kabtanka kooxda Roma Francesco Totti ayaa ka hadlay sida uu u jeclaan lahaa inuu ka hoos ciyaaro tababare Jose Mourinho.
Tababarahan 48 jirka ah ayaa ku soo qaatay waqtigiisa Serie A 2008 ilaa 2010, isagoo Inter ku hogaamiyay labo horyaal iyo Champions League.
Totti ayaa sheegay inuu aad u yaqaano shaqada Mourinho, waxaana uu rumeysan yahay inuu la shaqeeyo Mourinho inay sii laheyd qibrad aad u weyn.
“Waa jeclaan lahaa inaan isaga la shaqeeyo” ayuu Totti u sheegay Sky Sport Italia, iyadoo wareysi dheer uu siiyay la baahin doono maalinta berri ah. “Waxaan aqaanaa ciyaartoy isaga la soo shaqeysay waxaana ay ii sheegeen inuu yahay nin shaqadiisa ku xeeldheer”
“Waa tababare qof walba uu wax badan ka baran karo” ayuu yiri Totti.
Falanqeynta Kulamada Xiisaha Leh Ee Boxing Day Ee Horyaalka Ingariiska Ee Pemier League.
Garoonkooda loogama badin sannadkan, kooxda hogaanka u heysa Premier League Manchester City ayaa la ciyaari doonta kooxda West Brom kulanka soo socda ee Boxing Day.
City, oo hogaanka u heysa Premier League markii ugu horeysay iyadoo taariikhda ay xilligan mareyso tan iyo 1929kii ayaa barbaro 1-1 ah la gashay Liverpool, islamarkaana guuldarro 2-1 ah ay ka soo gaaray Chelsea labadii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti noqdaan, waxaana Mancini uu doonayaa inuu ku soo laabto wadadii guusha marka ay la kulmayaan kooxda West Brom.
City ayaa dhaawacyo yaryar qabta ka hor seddex kulan ee ay ciyaari doonaan, waxaana diyaar u soo noqon doona daafacooda Micah Richards.
United oo kaalinta labaad ku jirta ayaa iyadana sidoo kale ay dhaawacyo hareeyeen, iyadoo Ashley Young uu ahaa ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee dhaawac laga soo sheego.
Man United ayaa garoonkeeda ku martigelin doonta kooxda Wigan Athletic, waxaana farxad geliayy warka ku aadan in Phil Jones uusan jab ka soo gaarin daanka kulankii ay Fulham 5-0 kaga badiyeen, inkastoo Ashley Young uu seegi doono kulanka Boxing Day.
Kooxda kale ee dhaawacyada ay la dageen ee Tottenham kuna jirta kaalinta seddexaad ayaa waxa ay u safri doontaa kooxda Norwich City maalinta talaadada.
Waxaa ka maqnaan doona Rafael van der Vaart iyo Aaron Lennon, halka weeraryahan Jermaine Defoe uu isna dhaawac kuseegi doono kulankaan.
Kooxda kaalinta afaraad ee Chelsea ayaa iyadana daafac yari ay heysaa, iyagoo maalinta berri ah ciyaari doona kulanka derby West London oo ay la ciyaarayaan deriskooda ay isku dhow yihiin ee Fulham.
Tababare Andre Villas-Boas, oo ka walwalsan xaalada fayow qabka ee Branislav Ivanovic iyo John Obi Mikel oo laga saaray kulankii Tottenham, ayaa sheegay inuu daafac dhexe soo iibsan doono bisha Janaayo.
Lakiin ilaa iyo markaas, tababaraha reer Portugal sida dhigiisa Tottenham iyo Manchester United waa inuu wax isku macbileeyaa marka uu ka hortagayo kooxda Fulham.
Kooxda kaalinta shanaad ee Arsenal ayaa waxa ay u safri doontaa kooxda Wolves maalinta talaadada, iyagoo la filayay inay ciyaaraan berrito ayay dib u dhigeen kulankoodaan.
Arsenal ayaa iyadana dhaawacyo ay hareeyeen, waxaana weli uu tababare Arsene Wenger uu garbaha daafaciisa u isticmaali doonaa ciyaaryahanada ka ciyaara daafac dhexe.
Liverpool ayaa fileysa inay meel iska dhigaan arimaha la xiriira Luis Suarez marka ay la kulmayaan berri kooxda Blackburn Rovers.
Steven Gerrard ayaa laga yaabaa inuu kursiga keydka ugu yaraan soo fariisto, isagoo tababarka kooxdiisa ka qeyb qaadanayay maalmihii u danbeysay.